Kenya: “Somaliland waxaan u aqoonsanahay maamul Goboleed katirsan Soomaaliya” - Hablaha Media Network
Kenya: “Somaliland waxaan u aqoonsanahay maamul Goboleed katirsan Soomaaliya”
HMN:- Doowlada Kenya, ayaa warsaxaafadeed ay kasoo saartay socdaal uu dhawaan gudoomiyaha Gobolka Meru ku tegay deegaanada waqooyi ee Soomaaliya, ku sheegtay in Somaliland ay u aqoonsantahay maamul Goboleed katirsan jamhuuriyada Soomaaliya.
Afhayeenka Doowlada Kenya Manoah Esipisu,ayaa Saxaafadda u akhriyey Qoraalka Xeerka Mudaaharaadka oo ku socotay Guddoomiyaha Gobalka Meru, oo isaga sabab u noqday in si KMG ah Qaadka Kenya looga joojiyo Somalia.
Afhayeenka waxa uu ku eedeeyey Guddoomiyaha Gobalka Meru inuu mas’uu ka ahaa Masiibadii Qaadka, wuxuuna uga digay dhamaan Guddoomiyayaasha Goballadda Kenya inaysan ku durdurinin ama ku xad-gudbin dalalka Madaxa Bannaan.
“Peter Muru waxa uu u socdaalay Somalia iyo inuu qaar ka mid ah Maamulayaasha la soo gaaray Heshiis ku saabsan Ganacsiga Qaadka” ayuu yiri Afhayeenka Dowladda Kenya, Manoah Esipisu oo intaasi ku daray inuu Peter Munya wada-hadal la yeeshay Maamul-gobaleed iyadoo aysan Dowladda Dhexe ee Somalia ka war qabin arrintaasi.
Manoah Esipisu,ayaa carrabka ku dhuftay inay Dowladda Federalka Somalia u aragtay safarkii Peter Munya ku tegay magaalladda Hargeysa mid muujinayso inay Dowladda Kenya u aqoonsatay Maamulka Somaliland sidii Waddan Madax-bannaan, taasi oo sababtay in Xayiraad KMG lagu soo rogo Qaadkii laga keeni jirey Kenya.